Live Life Dezine | Architecture & Design Magazine in Myanmar
အောင်မြင်တဲ့လူငယ် Architect တွေဖြစ်ဖို့ သိထားသင့်တဲ့အချက် (၁၀) ချက်
Architecture ဟာ Hetic အဖြစ်ဆုံး Major တွေနဲ့တန်းတူရှိနေတယ်လို့ ယုံယုံကြည်ကြည်ယူဆလို့ရပါတယ်။ ဒီနယ်ပယ်ထဲကိုဝင်လာပြီဆိုခဲ့ရင် ကျွန်တော်တို့ရဲ့အချိန်တွေနဲ့ ကြိုးစားမှုတွေကို ၁၀ဝ% နှစ်မြှုပ်ထားဖို့ လိုအပ်ပါတယ်။ Architecture School တစ်ခုကို စတင်တက်ရောက်တော့မယ်ဆိုတာနဲ့ စိန်ခေါ်မှုတွေနဲ့ပြည့်နေတဲ့ ခရီးစဉ်တစ်ခုက ကျွန်တော်တို့ကိုစောင့်ကြိုနေပါပြီ . . . .
ဗိသုကာကိရိယာတွေက စိတ်ကူးစိတ်သန်းတွေကိုမြင်တွေ့၊ ထိတွေ့လို့ရနိုင်အောင် ကူညီထောက်ပံ့ပေးနိုင်တဲ့မရှိမဖြစ်အရာတွေဆိုလည်းမမှားပါဘူး။ နည်းပညာတွေတိုးတက်လာပေမယ့်လည်း ပုံကြမ်းရေးခြစ်ခြင်းကတော့ စိတ်ကူးတွေကို အရင်ဆုံးသုံးသပ်ကြည့်နိုင်တဲ့၊ ချပြကြည့်နိုင်တဲ့ပဏာမအဆင့်ပဲဖြစ်ပါတယ်။ ဒီဇိုင်းတွေကိုရုပ်လုံြးွကလာအောင်၊ ကိုယ်ပေးချင်တဲ့ Message ချပြနိုင်ခွင့်ရအောင်၊ ရှိပြီးသားပါရမီတွေကို ပိုကောင်းအောင် . . . .
စင်စစ် မြန်မာဗုဒ္ဓဘာသာဝင်တို့ သက်ဝင်ယုံကြည်ထားသည့် လေးကျွန်းတစ်မြင်းမိုရ် စကြာဝဠာပုံရိပ် မြန်မာဘုန်းတော်ကြီးကျောင်းတက်ခဲ့သူတိုင်းနားလည်ကြသည်။ ဤအကြောင်းအားသိမထားလျှင် မြန်မာ့အနုပညာ၊ မြန်မာ့ရိုးရာ ဓလေ့၊ မြန်မာ့ဗိသုကာလက်ရာဟန်ကို နားမလည်နိုင်ပါ . . . . .
စကားလုံးတွေနဲ့ Figures တွေတင်မကဘူး၊ Drawing တွေလည်းလိုလာပြီ၊ Conceptual Design Drawings တွေပေါ့၊ Details တွေကို Fine ဆွဲပြဖို့မလိုဘူး၊ Sketch တွေနဲ့ တင်ပြလို့ရတယ်၊ ပြီးခဲ့တဲ့စကားလုံးတွေနဲ့ ပုံဖော်ဒီဇိုင်းလုပ်တဲ့အဆင့်ထိက အလုပ်တွေအများကြီးလုပ်၊ စာတွေအများကြီးဖတ်၊ များများလေ့လာ . . . . .
ဗိသုကာကျောင်းသားတစ်ယောက်အနေနဲ့ဖြစ်စေ၊ Professional တစ်ယောက်အနေနဲ့ဖြစ်စေ Portfolio ကောင်းတစ်ခုရှိဖို့လိုအပ်ပါတယ်။ Portfolio ဆိုတာ ကျောင်းသားတစ်ယောက် ဒါမှမဟုတ် Professional တစ်ဦးရဲ့အတွေးအခေါ်..ဖြတ်သန်းလာတဲ့ပညာရေး၊ အလုပ်အကိုင်စတဲ့အချက်တွေကို ဖော်ညွှန်းပြသတဲ့အရာ တစ်ခုဖြစ်ပါတယ် . . . .